Mahotera ane zvirongwa zvakasiyana zveZuva raValentine | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | Getaways, General, Kudanana
Kunyangwe isu tiri kufunga nezve kunakidzwa kweCarnivals, kana isu tiine mumwe wedu isu tinofanirwa kuronga chimwe chinhu kwezuva iro zvakare riri padhuze, iyo Kukadzi 14, Zuva raValentine. Zororo ravanoti nderekutengesa zvakanyanya, asi iri imwe nguva yekuzivisa vatinoshanda navo kuti zvakakosha kwatiri uye kuti tinoda kupemberera zuva iri nevamwe vazhinji.
Ndosaka tichizokupa mashoma mazano ezuva revaenzi, nemahotera anopa akasiyana zvirongwa zvekugovana sevanhu vaviri. Kubva pachikamu chepa spa, chinova chinowanzoitika, kune zuva rekudya kana vaviri vedu vachida kuyedza mitsva yekukwira mabhiza. Iko kune mazano ezvese zvido, saka isu hatifanire kumira pamaruva uye machokoreti egore rega. Ino nguva isu tinokwanisa kugadzira zvishoma zvishoma kuti tirarame yakasarudzika chiitiko.
1 Valentine vane adventures
2 Zuva reValentine mumaspas
3 Valentine ine gastronomic getaways
4 Zuva reValentine, akanyanya epamberi getaways
Valentine vane adventures
Kana mumwe wako aine ruzivo uye achida manzwiro, iri rinogona zvakare kuve zuva rekurarama rakasimba uye rinonakidza ruzivo. PaIhotera Boí Taüll Resort unogona kunakidzwa ne kutiza nekupfuura kwechikepe kunakidzwa kupera kwevhiki mumakomo eCatalonia. Mazuva ekutsvedza uye kufara muchando, kuseka pamwechete uye kudzidzira mutambo unonakidza. Kune zvirongwa zvine makomo echando kutungamira uye kukwira matombo, saka tinogona kusarudza chirongwa chatinoda muLleida Pyrenees.
PaIhotera los Nogales muAragon iwe unogona kuita a kupukunyuka nekunaka bhiza kukwira mune zvakasikwa zvisikwa. Yakanaka kune vanoda mhuka uye nharaunda nharaunda. Inowanikwa muBenasque Valley, muAragonese Pyrenees, uye hotera yacho zvakare inopa kutiza kunakidzwa nespa, uye iwe unogona kusarudza kamuri ine hydromassage bath.
Isuwo tine inoronga kuenda rafting muCantabria, kuPosada La Cabaña de Salmón, muSantillana del Mar.Iyo imba yekare yezana ramakore rechiXNUMX ine runako rwakawanda, iyo iri zvakare makiromita maviri chete kubva kumapako eAltamira. Kutiza neruzivo uye nhoroondo, izvo zvirinani zvakanyanya kusarudzika.
Zuva reValentine mumaspas
Iri izano rakajairika, uye kunyangwe tichazotaura mamwe mahotera, zvirokwazvo padhuze nepaunogara iwe unowana imwe ine spa kana spa yekunakirwa. kuzorora zvishoma semurume nemudzimai. Uye zvakare, mahotera mazhinji anopa mabhodhoro ecava uye emanheru emanheru pamazuva aya, saka rinogara riri zano rinoshanda.
PaIhotera Balneario Lanjarón tichafadzwa ne kupukunyuka nekudya kwemanheru uye kuwana kune iyo spa. Uye zvakare, iri muGranada, padyo neguta uye neSierra Nevada Natural Park, saka kana tiine nguva tinogona kuona Alhambra kana kuenda kunonakidzwa nesinou. Hotera ine yakakwana kwazvo kupihwa.
Mumwe muenzaniso weakasarudzika unokwanisa kuve iyo Spa Spa Casona La Hondonada, muCantabria. Ihotera yekumaruwa, yakanyarara, kwavanopa makamuri ane whirlpool bathtubs uye kudya kwemanheru, sepakiti reZuva raValentine. Kune hurongwa hwakafanana muIhotera Balneario Areatza muVizcaya, nekuzorora pakati pezvisikwa uye nekombiri yedunhu, padhuze neGorbea Natural Park. PaIhotera Balneari Temu Victoria munzvimbo ine nhoroondo yeCaldes de Montbui une dziva rinopisa uye chikafu chinonaka paZuva raValentine.
Valentine ine gastronomic getaways
Kune mahotera anotarisisa pane gastronomic chimiro, nemanheru kana masikati umo unogona kunakirwa neyakajairwa kicheni kubva munzvimbo iyi kuyedza zvinonaka uye zvinehunyanzvi ndiro, saka zvakanakira kana vaviri vacho vachida kuyedza chikafu nemadhishi. Zviripachena, kuyedza chimwe chinhu chitsva iwe uchafanirwa kuenda kune dzimwe nzvimbo pakupera kwevhiki.
PaIhotera bon Retorn muFigueres muAlt Empordá unogona kunakidzwa ne waini kuravira uye kudya kwemanheru umo ivo zvakare vanopa maini enharaunda, ane mukurumbira, uye netikiti kukasino. Icho, chokwadika, chakapfurwa chepakutanga chine poindi inosetsa.
KuHospes Palacio de San Esteban une gastronomic getaway muSalamanca, kuyedza iwo chaiwo madhishi muresitorendi yenyeredzi shanu. Vanopa bhodhoro re cava kupemberera chiitiko chakakosha, uye ichave nzira yakanaka yekunakidzwa nechikafu cheCastilian.
Zuva reValentine, akanyanya epamberi getaways
Kune mamwe mazano akasarudzika uye epakutanga, saka iwo marongero ekufunga nezvazvo. Pahotera yeShanti Som Wellbeing Retreat muAndalusia, vanonamata zvakanyanya vanogona kunakirwa chikafu cheAsia neEastern fusion, iine Lemon Ginger Kukwesha Muviri Kurapa munzvimbo yakasikwa uye inozorora kwazvo. Ihotera zvakare inoteedzera zvirevo zveFeng Shui uye ine zvirongwa zveyoga.
PaIhotera Hospes Puerta Alcalá muMadrid iwe une iyo yakakosha kurongedza Aires del Sur. Iwe unogona kunakidzwa nekugara kwako uye kushanyira imwe-awa flamenco show muLas Tablas. Ivo zvakare vane mukana weiyo spa ine yekuzorora dziva uye iri padyo neRetiro Park.
Aya angori mashoma kurudziro yekuita zuva rino chinhu chakakosha. Zviripachena, kune mamwe akawanda marongero nemahotera munyika yese, asi isu tinovimba tanga tiri rekubatsira kwauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways » Kudanana » Mahotera ane zvirongwa zvakasiyana zveZuva raValentine
Getaways dzeZuva raValentine